ဖူကျန့် (福建, Fukien , Foukien) ပြည်နယ်( Fujian )သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်တွင် ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ကျန်းရှီးပြည်နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် ကွမ်တုန်းပြည်နယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား နှင့် ထိုင်ဝမ် တို့ တည်ရှိသည်။  ဖူကျန့်ဟူသော အမည်နာမသည် ထန်မင်းဆက် ခေတ် (Tang Dynasty) က ဖူကျိုးမြို့ (Fuzhou) နှင့် ကျန့်ကျိုးမြို့ (Jianzhou) နှစ်ခုတို့၏ အမည်များကို ပေါင်းစပ်၍ ခေါ်ဝေါ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖူကျန့်ပြည်နယ်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ယဉ်ကျေးမှုအရရော၊ ဘာသာစကားအရပါ ကွဲပြားမှုများ အများဆုံး တည်ရှိရာပြည်နယ်ဖြစ်သည်။
福建省2009年国民经济和社会发展统计公报။ 中国统计信息网။ 22 February 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Retrieved 2010-05-01
These are the official PRC numbers from 2009 Fujian Statistic Bureau. Quemoy is included asacounty and Matsu Islands asatownship.
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Forestry in Fujian Province။3May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 23 February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဖူကျန့်ပြည်နယ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် နေရာများ